‘गठबन्धनसँग जित्ने बानी परिसक्यो, हामीलाई केही फरक पर्दैन’ – Nepal Press
बुटवल मेयरका एमाले उम्मेदवारसँगको कुराकानी
२०७९ वैशाख २५ गते ६:४०
नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य बाबुराम भट्टराई आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुखको पदमा उम्मेदवार बनेका छन् । २०३२ सालदेखि कम्युनिष्ट पार्टीमा आवद्ध भट्टराई अघिल्लो निर्वाचनमा पनि बुटवलको मेयरका लागि अन्तिम दौडमा रहेका थिए । १३ वर्ष हुँदादेखि नै राजनीतिप्रति चासो राख्न थालेका उनी पार्टीका नेताहरु भूमिगतकालमा भेट भएपछि जोडिएका हुन् ।
लामो समय व्यवसाय सेक्टरमा रहेर काम गरेका उनी पार्टीको जिल्ला कमिटीहुँदै हाल प्रदेश कमिटी सदस्य छन् । नेपाल औषधि व्यवसायी संघका पूर्वराष्ट्रिय अध्यक्ष भट्टराईले पार्टीको केन्द्रीय स्वास्थ्य विभागमा रहेर पनि काम गरेका छन् । दुई दशकदेखि बुटवलमा स्थायी बसोबास गर्दै आएका उनले बुटवलको सबै समस्या बुझेको बताएका छन् ।
लामो समय पार्टीको स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी मतदाताको घरदैलोमा व्यस्त छन् । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको गृहनगर भएकाले पनि यहाँको जितहार उनको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनले जसरी पनि एमालेको विरासत तोड्न चाहेकाले यहाँको निर्वाचन रोचक बनेको छ । दुई दशकदेखि बुटवलमा बसेका भट्टराईसँग रामप्रसाद आचार्यले गरेको कुराकानी नेपाल टकमा–
मतदातासँग भोट माग्दै गर्दा कस्तो महसुस भएको छ ?
निकै माया पाएको छु, जितको संघारमा पुगेको महसुुस गरिरहेको छु । औपचारिकता दिन वैशाख ३० गते पर्खिरहेको छु । सिंगो पार्टी पंक्ति एकताबद्ध भएर लागेको छ । व्यवसायी, अन्य मतदाताको उस्तै माया पाएको छु ।
निर्वाचन जित्ने आधार के–के हुन् ?
म त मतदाता र पार्टीको वारिस हुँ । पार्टीको निर्वाचन परिचालन कमिटी र श्रद्धेय नेताहरु, पार्टीको लागि असिनपसिन भएर खट्नुहुने आदरणीय साथीहरु, आफ्नो पार्टीको विजयको अभियानमा तन मनले लाग्नुभएको छ । यो मेरो जित हैन, उहाँहरुको जित हो । नेकपा एमालेको जित हो ।
अनि अनुशासित र विनम्रतापूर्वक गरिएको मतदातामैत्री घरदैलो भेटघाट कार्यक्रममा देखिएको जनसहभागिता र उत्साह यसको उदाहरण हो । यो नै जितमा महत्वपूर्ण आधार हो । मलाई पार्टीभित्रको मात्र होइन अन्य क्षेत्रबाट पनि निकै ठूलो रेस्पोन्स पाएको छु ।
मतदातालाई के योजना सुनाउनुभएको छ ?
मेरो उद्देश्य बुटवललाई आर्थिक राजधानी बनाउनु हो । बुटवल लुम्बिनी प्रदेशको सबभन्दा ठूलो आर्थिक केन्द्र त हुँदै हो । यसलाई पूर्वाधारले युक्त बनाएर संघीय राजधानीपछिको दोस्रो आर्थिक केन्द्र बनाउँछौँ ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पूरा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह, प्रदर्शनी केन्द्र, सिद्धबाबा सुरङ मार्ग, पोखरासम्मको सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरवृद्धि, नारायणघाट–बुटवल ६ लेनको सडक खण्ड, बुटवल– भालुवाङ् ६ लेन सडक खण्ड, बेल्बास बेथरी सडक, तिनाउ सिङ्नेचर ब्रिज, वसन्तपुर नुवाकोट केबुलकार, रामापिथेकस जियोलोजिकल पार्कलगायत थुप्रै निर्माणधीन संरचनाहरुले बुटवल कस्तो बन्ला ?
बुटवलमा थामी नसक्नु गरी लाखौँ पर्यटकहरु ओइरिन्छन् । भैरहवा एयरपोर्ट, बुटवल बेलहिया सडकले हामीलाई आर्थिक केन्द्रको लागि अनुकूलता दिएको छ । बुटवल पश्चिममा सबैभन्दा बढी आर्थिक कारोबार हुने क्षत्र हो । बुटवल राजधानी त बनिसक्यो । पूर्वाधारले आर्थिक गतिविधिहरु अरु तीव्र रुपमा बढ्छन् । अब व्यवस्थित गर्न बाँकी छ । हामी व्यवस्थित गर्छाै ।
निर्वाचनपछि मतदातालाई उम्मेदवारले वास्ता नगरेका गुनासा आउने गरेका छन् ?
निर्वाचनमा हामीले देखाएको विनयशीलता अन्तिमसम्म देखाउनु पर्छ । सामन्ती चमकदमक र आडम्बर हाम्रो शैली हुन सक्दैन । हामी जनताका वारिस हौँ । मतदाताले हामीलाई बेवारिस बन्न नदिनु होला । आदरणीय मतदाताको निगरानी र नियन्त्रण बलियो बनाउनु पर्छ । सुशासन र पारदर्शिता बलियो बनाउनु पर्छ । लोकतन्त्र संस्थागत होस् । जनता बलियो हुनु नै लोकतन्त्रको विशेषता हो ।
लोकतन्त्रमा सत्ताको वागडोर मतदातामा हुन्छन् । हामी जनताको अंकुशमा छौँ । मन नपरेमा मतदाताले पाँच वर्षमा अंकुशले तानेर मिल्क्याउँछन् । त्यसैले हामी राजा हैनौँ । गणतन्त्रका जनप्रतिनिधि हौँ । म आममतदाताप्रति त्यसमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु ।
बुटवलमा राजधानी राख्न सक्नुभएन भन्ने आरोप छ नि ?
राजधानी राख्ने, नराख्ने प्रदेशसभाले हो । यो हाम्रो बुताको कुरा हैन । हामी जनता र हाम्रा जनप्रतिनिधिले राजधानी बनाउने इच्छा राखेको साँचो हो । प्रदेशको राजधानी तोक्न निश्चित विधि र प्रक्रिया चाहिन्छ । त्यही विधि प्रक्रियाका आधारमा राजधानी भालुवाङ पुग्यो ।
लोकतन्त्रमा विधिको शासनलाई स्वीकार गरिन्छ । बहुमतलाई मानिन्छ । संघीय सरकारले गरेको निर्णय पनि हैन । त्यो प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो । व्यक्तिभन्दा विधि ठूलो हो । कसले सक्यो कसले सकेन भनेर व्यक्तिलाई विधिभन्दा माथि ठानेर हल्ला मच्याउनु अराजकता हो ।
चौराहा गोलपार्क सडकको विषयमा उपमहानगरपालिकालाई आलोचना छ, कसरी पूरा गर्नुहुन्छ ?
यो सडक संघीय बजेटबाट बन्ने सडक हो । यसमा हाम्रो काम सहजीकरण र समन्वय गर्ने हो । दुई वर्ष त अदालतको स्टे अर्डरले पर धकेलिदियो । अहिले बनिरहेको छ । निर्माणधीन सडकको विषयमा मुद्दा उठाउनु हास्यास्पद हो ।
विकास बटम थिचेर आउँदैन । निश्चित प्रक्रिया र अवधि पूरा गर्नैपर्छ । धैर्य भएर सम्पन्न हुन दिनु प–यो। हामीले यसलाई धूलो हुन नदिने, खाल्डाखुल्डी पुर्ने काममा सहजीकरण र समन्वय गर्नेछौँ । ठेकदारलाई ढिलो गर्न दिदैनौँ । प्रदेश सरकारले पनि सहजीकरण र समन्वय गर्नेछ । अब छिटो काम सम्पन्न गर्ने कुरामा हामी लाग्छौँ ।
कालिका पथ र यो सडक बनेपछि बुटवलको मुहारै फेरिन्छ । आगामी ५ वर्षमा त हामीले कालोपत्रे भ्याउन सक्ने सम्भावना छ । यो नेपालकै नमूना सहर बन्छ । यसको लागि पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलजस्ता सङ्घीय साँसद पाएका छौँ । बुटवल मात्र हैन सिङ्गो रुपन्देही उहाँप्रति ऋणी छ । अरु बुटवलमा सयौं परियोजना बनेका छन् । ती कामको फेयरिस्त दिन यो छोटो संवादमा सम्भव छैन ।
जितेपछिका के–के योजना छन् ?
हाम्रा थुप्रै योजना छन् । हामीले घरदैलोमा प्रतिबद्धतापत्र दिएका छौँ । हामी त्यसै अनुसार बुटवललाई स्वर्ग बनाउँछौँ । हामी भाग्यभन्दा कर्ममा विश्वास गर्छाैँ । मिहिनेतले स्वर्ग बनाउने हो । बुटवल नेपालकै नमुना सहर बन्छ । यसमा ढुक्क हुनुस् । हामी बुटवलका विकासका लागि आर्थिक विज्ञहरुको टिम बनाएर अघि जान्छौँ ।
प्रतिस्पर्धीहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
प्रतिस्पर्धी, प्रतिपक्ष सत्तापक्षकै अभिन्न अङ्ग हो । पक्ष प्रतिपक्षबीच विकासमा एकता र विचारमा संघर्ष रहिरहन्छ । हामी गालीको राजनीति गर्दैनौँ । प्रतिपक्षले गाली हैन,सत्ता पक्षको शिष्ट आलोचना र सम्यक समीक्षा त गर्नैपर्छ । तर बुटवलकै प्रतिपक्षले शैली पूरै फेर्नुपर्छ । एकता र संघर्षको वैज्ञानिक विधिमा आउनु पर्छ ।
अहिले बुटवलको प्रतिपक्ष मुद्दा नपाएर निर्माणधीन सडकको मुद्दा उठाउँदैछ । एमाले सरकारले लालपुर्जा दिन ठिक्क पारेको कामलाई आयोग विघटन गरेर महिनौ होल्डमा राखेर एमालेविरुद्ध लालपुर्जा दिएन भनेर चिच्याउँदैछ । एमाले सरकार रहेको भए २० हजार अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आजसम्म ढुक्कसँग हात हातमा लालपुर्जा दिइसक्थ्यौँ । अबको हाम्रो पहिलो काम यही हो ।
निर्वाचनमा खर्च कसरी चलाउनु भएको छ ?
योपटक प्रचारप्रसारको छोटो अवधि भएको हुनाले खर्च स्वतः कम भयो । निर्वाचन आयोगले निकै राम्रो काम गरेको छ । अनि नेकपा एमाले बुटवल उपमहानगर कमिटीले योपटक मितव्ययी निर्वाचनको पाठ सिकाउने छ । जमाना फेरिएको छ । अब मत किन्नु एकादेशको कथा बन्न सक्छ । आशा छ, त्यो जमाना छिट्टो आओस् ।
आजभोलि मतदाताहरु धेरै अगाडि हुनुहुन्छ । मत किन्नु भ्रष्टाचार हो । अभियानमा अति खट्ने साथीहरुले समान्य दाल भात तरकारीले चलाएका छौँ । आचारसँहिता पालन गर्न निर्वाचन आयोगले मात्र हैन यो पटक त हामीलाई आदरणीय नेताहरुले पनि बारम्बार निर्देशन र खबरदारी गरिरहनु भएको छ । समाज सभ्य बन्दैछ । पहिलाको तुलनामा शान्तिपूर्ण पनि बन्दै गइरहेको छ । समाज रुपान्तरण हुन्छ । समाजले अब के गरिदै थियो हैन, के गर्नुपर्ला भनेर सोच्दैछ । मुलुक बदलिन्छ ।
तपाइँको आलोचना गर्नेहरु स्वभाव अलि कम बोल्ने भएको कारण बाबुराम अन्तरमुखी भन्छन् नि ?
हो, म कम बोल्छु । दुईटा कानले १० मिनेट सुन्छु, एउटा मुखले ५ मिनेट उत्तर दिन्छु । यो मेरो स्वभाव हो । यस्तो गर्दा सेवाग्रहीमाथि मानसिक दबाब पर्दैन । स्वास्थ क्षेत्रमा रहँदा यो बानी पर्यो ।
तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना के बनाउनुभएको छ ?
दीर्घकालीन योजना के नेपालको मध्यबिन्दु र आर्थिक राजधानी हो बुटवल । बुटवलमा अहिले जति पनि विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्, केही पूरा हुने क्रममै छन् । सबैभन्दा पहिले बुटवलमा निर्माणाधीन आयोजना पूरा गर्ने पहिलो काम हाम्रो हुनेछ ।
अहिले हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू र विकास निर्माणका कामलाई हामीले बढी ध्यान दिनेछौं । बुटवल पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो । बुटवलको सबैभन्दा ऐतिहासिक ठाउँ जीतगढी किल्ला जहाँ अंग्रेज पनि आएर हारेको ठाउँ हो ।
कर्णेल उजिरसिंहले विजय प्राप्त गरेको क्षेत्रलाई पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा अगाडि बढाउछौं । कर्णेल उजिरसिंहले विजय प्राप्त गरेको ठाउँनजिकै गढी टोल भन्ने छ । त्यहाँ धेरै कामहरू भएको छ । त्यसलाई पनि हामीले विकासको रूपमा हेरिरहेका छौं । अहिले जुन कामहरू भइराखेका छन्, अटोभिलेजदेखि लिएर ढुवानी ग्राम लगायतका कामहरूलाई निरन्तरता दिएर तिनलाई अझै विकास गर्दै लैजान्छौं ।
प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल यहीँ छ । अस्पताल बनाउन नेकपा एमालेकै कार्यकालमा प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याइसकेको छ । विशिष्ट सेवासहितको दश तले अस्पताल बन्दैछ । त्यो अस्पतालको टेन्डर गर्दा अहिलेका मुख्यमन्त्रीले आर्थिक प्रलोभनमा परेर एक डेढ अबको हिनामिना गर्न थाल्नुभएको थियो । उहाँहरूले नै नियुक्त गर्नुभएका सीईओले बाध्य भएर राजीनामा दिनुभयो ।
यस्ता कामहरूलाई रोक्न हामीले खबरदारी गर्नुपर्नेरहेछ भन्ने हामीले महशुश गरेका छौं । अन्य विकास निर्माणका कामहरू यहाँको कालिकापथलाई रात्रिकालीन बजारको रूपमा विकास गर्दैछौं । त्यस्तै पुरानो बटौलीलाई पौराणिक खालको बजारको रूपमा विस्तार गर्दैछौं । त्यहाँ पुराना कस्ता खालका घरहरू थिए, त्यही अनुसारको नक्सांकन गरेर नगरपालिकाले नक्सा पास गर्दा पैसा नलिने व्यवस्था बनाउँछौं । पुराना चिजहरू पाइने नाइट मार्केट बनाउने हामीले सोचेका छौं ।
एमालेविरुद्ध ५ दलको चुनावी प्रतिस्पर्धामा छ । कसरी जित्न सकिने दाबी गर्नुहुन्छ ?
गठबन्धनले बुटवललाई केही प्रभाव पार्दैन । तत्कालीन नेकपा भइसकेपछि नेकपा एमाले र माओवादी एक बन्यो । नेकपा विभाजन भएर एमाले र माओवादी भएपछि जति माओवादी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यसको ८० प्रतिशत साथीहरू एमालेमा हुनुहुन्छ । पहिले बस्दा ६० प्रतिशत बस्नुभएको थियो । अरू २० प्रतिशत अहिलेसम्म प्रवेश गरी थपिनुभएको छ ।
पार्टी फुट्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी भयो भन्नुहोला । एसमा जति जानुभएको छ, त्यसको दोब्बर तेब्बर माओवादीको साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ । त्यसैले हामीलाई मतको हिसाबले फरक पर्दैन । अर्को कुरा के छ भने माओवादी मजबुत हुँदा खेरी २०७४ मा राष्ट्रिय जनमुक्ति, कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन थियो । त्यो गठबन्धनलाई पनि हामीले एक्लै जितेको हो ।
अहिले के छ भन्दाखेरी जनमुक्तिका साथीहरूलाई केही सदस्य दिएर हामीले पनि गठबन्धनको रूपमा अगाडि बढेका छौं । उहाँहरूको भोट पनि थपिँदा हाम्रो अझै राम्रो हुन्छ । हामी त्यसै मजबुत छौं, त्यसमा जनमुक्ति थपिँदा हामीलाई सुनमा सुगन्ध हुन्छ । त्यसैले यहाँ हामी डराउनुपर्ने कुरा केही पनि छैन ।
तपाईंलाई कसको बलमा टिकट पाएजस्तो लाग्छ ?
म पार्टीको इमान्दार सिपाही हुँ । सबै अग्रज नेताहरुले मलाई माया गर्नुहुन्छ । यो विष्णु पौडेलको क्षेत्र भएकाले उहाँले नै धेरै जोड गर्नुभयोजस्तो लाग्छ मलाई । उहाँसँगको सम्बन्ध धेरै पुरानो हो । उहाँले यो कस्तो हो भन्ने कुरा पनि जान्नुभएको थियो । र महासचिव शंकर पोखरेलले पनि जान्नुभएको थियो । केपी कमरेडसँग त मजस्ता हजारौं कार्यकर्ता छन् । ओलीले हाम्रो घरमा सेल्टर हुँदा चिन्नुभएको थियो । त्यो दुईचार पटकको भेट न हो तर उहाँले अहिले पनि सम्झनु हुँदोरहेछ । उहाँले पनि अरूसँग बुझिराख्नुभएको होला । त्यसैगरी सचिव तथा प्रदेश इन्चार्ज छविलाल बिश्वकर्मा, अन्य सबै सिनियर नेताहरुको मलाई उस्तै माया छ ।
अन्तिममा मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
समृद्ध बुटवलको योजना हामीसँग छ । बुटवल र बुटवलवासीको भविश्य बनाउन हामीलाई मतदान गर्नुस् । यो हाम्रो बिगतले बताएको छ । केही योजना पूरा भएका छन्, केही प्रकृयामा छन् बाँकी रहेका योजना पूरा गर्छाै । नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्छाैँ । यसको लागि हामी यसअघिका जनप्रतिनिधिहरुले बनाएको बाटोमा हिँड्ने प्रण गर्छाैं । उहाँहरुबाट अनुभव लिन्छौँ ।
पार्टीले र आर्थिक विज्ञ टिमले तयार गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा टेकेर लक्षमा पुग्छौँ । मानव संसाधनको विकास र भौतिक विकास दुबै गर्छाै । ढुक्क हुनुस् । हामीलाई मतदान गरेर भोलि पछुताउनु पर्ने छैन । स्वाभिमान मतदाताको शिर निहुराउन दिनेछैनौँ । हामी इमान्दार रहनेछौँ । ५ वर्षमा समाजवादको आभास दिन्छौँ ।
प्रकाशित: २०७९ वैशाख २५ गते ६:४०